ချစ်သောကဗျာ-၄ | PoemsCorner
ကဗျာကောင်းဟု သတ်မှတ်ကြသောကဗျာများကို ကြည့်လျှင် နှစ်မျိုးတွေ.ရပါသည်။ အချို.ကဗျာများက နားကိုထိခိုက်သည်။ အချို.ကဗျာများက နှလုံးသားကို ထိခိုက်သည်။ နားကိုဖြတ်၍ နှလုံးသားဆီသွားသော ကဗျာများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ (နောက်ဆုံး ရောက်သောနေရာ ကိုသာယူပါမည်။)
နားကို ထိသောကဗျာများသည် ရံဖန်ရံခါ နှလုံးသားဆီသို.ရောက်ခြင်းမရှိပေ။ ယင်းကဗျာများသည် များသောအားဖြင့် စကားလုံး“ပြောင်”ခြင်းပေါ်တွင်အမှီပြုထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အချို.ကဗျာများတွင် စာဖတ်သူ(ကဗျာဖတ်သူ) ကို အလန်.တကြားဖြစ်သွားစေသော စကားလုံးများပါနေနိုင်သည်။ ခဏတာမျှ ပဲ့တင်ထပ်နိုင်သော်လည်း ကာလ ဒေသကို မကျော်လွန်နိုင်၊ ကျော်လွန်နိုင်မှုအားနည်းခြင်းများ ရှိနေနိုင်ပေသည်။
နှလုံးသားကို ထိစေသော ကဗျာများကားများသောအားဖြင့် နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပေမည်။ ပထမတစ်မျိုးကား အတွေးပါသောကဗျာများဖြစ်သည်။ အရေးလှခြင်းသည် အတွေးလှခြင်းကလာသည်ဟူသော စကားကို အမှတ်ရစေချင်ပါသည်။
နောက်တမျိုးကတော့ ရှားသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ အမြင့်သို. အာရုံနွယ်တက်သောကဗျာမျိုးဖြစ်သည်။ (ပြောခဲ့ပီးပါပြီ) ထပ်ပြောရလျှင် လူသားဟူသည် အမြင့်သို. အာရုံညွန်.တက်သောသဘာဝရှိပါသည်။ အကောင်း၊အမှန်၊ အမြတ်တရားများကို ရှာဖွေတတ်သောသဘောရှိသည်။ ကဗျာတွင် လည်းရှာပါသည်။ (သို.သော် ကဗျာတွင် ရှာခြင်းသည် ခဲတံနီပြာတံဖြင့် မျဉ်းသား၍ ရှာဖွေခြင်းမျိုးမဟုတ်သည်ကို သတိထားတော်မူပါ။ )
ရှေးက ကဗျာသည် တေးနှင့်နွယ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတေးနှင့်လမ်းခွဲပြီးသည့်နောက်တွင် ကဗျာကိစ္စ သည် စကားပြေက ပြောပြ၍ မရသည်ကို ပြောပြရန်ဖြစ်လာပါသည်။ အတွေးဥာဏ်ဖြင့် သုံးသပ်၍ မရသည်ကိုပြောရန်ပါ။ မောင်ချောနွယ်စကားကထိမိပါသည်။ ရင်ဘတ်ခြင်း ပလပ်ထိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို.ဖြင့် အမြင့်သို. နွယ်တက်သောကဗျာမျိုးတို.သည်နှလုံးသားကို နက်ရှိုင်းစွာထိခတ်ပါသည်။ ပဲ့တင်သံချန်ပါသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်လည်း ပဲ့တင်ထပ်လေ့ရှိပါသည်။
စကားလုံးပြောင်သော ကဗျာများကို အပြစ်ပြောရန်မရှိပါ။ ချီးမွန်းရန်သာရှိပါသည်။ အချို.က စကားအသုံးလှသည်၊ လှသည့်စကားလုံးရှာသည်။ အချို.က မိမိ ပြောလိုသော အရာဆီရောက်ရန်ကွက်တိဖြစ်သောစကားကိုရှာသည်။
တာရာမင်းဝေ ပြောဖူးသောစကားကို အမှတ်ရပါသည်။ ပစ်သောမြားအမျိုးအစား မခွဲပါ။ ထိချက်သာလျှင် အရေးကြီးပါသည်။ မော်ဒန်၊ပို.စ်မော်ဒန်၊နီယိုမော်ဒန် ခွဲချင်လည်းခွဲတော်မူကြပါ။ ထိချက် မကောင်းလျှင် စကားလုံးများပြိုးပျက်နေခြင်းသာ အဖတ်တင်ပါမည်။
In: ဆောင်းပါး Posted By: မော်နီ Date: May 10, 2011
Leave comment 1 Comment & 254 views
ပစ်သောမြားအမျိုးအစား မခွဲပါ။ ထိချက်သာလျှင် အရေးကြီးပါသည်။ မော်ဒန်၊ပို.စ်မော်ဒန်၊နီယိုမော်ဒန် ခွဲချင်လည်းခွဲတော်မူကြပါ။ ထိချက် မကောင်းလျှင် စကားလုံးများပြိုးပျက်နေခြင်းသာ အဖတ်တင်ပါမည်။
ကဗျာတည်ဆောက်ပုံ့ကွာတာမျိုးကခွဲခြားနေတာဟာကဗျာေ၇းသူအနေနဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတယ်လို့ ကျနော်လဲယူဆတယ်
ကဗျာဟာအနာဂါတ်ဆီလှမ်းတု နြည်းပညာတွေပါရမှာဖြစ်သလိုသမိုင်းကြောင်းကိုလဲထမ်းပိုထားသင့် တယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာတည့် တည့် ရပ်ပြီးအမြင်တွေမှန်နေဖို့ တော့ လိုတာပေါ့ ။။။။။။။။။။။။